WAR DEG DEG AH:Dagaal dhiig badani oo ku daatay oo hada ka socda Tukaraq & Saldhigyadii Ciidamada Somaliland oo gudaha loo galay kadib markii…. – Puntlandtimes
WAR DEG DEG AH:Dagaal dhiig badani oo ku daatay oo hada ka socda Tukaraq & Saldhigyadii Ciidamada Somaliland oo gudaha loo galay kadib markii….
GAROWE(P-TIMES)- Wararka Warsidaha Puntlandtimes.com uu hada ka helayo jiidaha hore ee deegaanka Tukaraq ee gobolka Sool ayaa sheegaya in dagaal culus uu ka dhacay halkaasi habeenkii xalay ahayd.
Dagaalkani oo u dhaxeeyey ciidamada maamulka Somaliland iyo jabhadda xoreynta gobolka Sool ayaa yimid kadib markii ciidamo ka tirsan Jabhadda xoreynta gobolka Sool ay weerar ku qaadeen saldhig ciidamada Somaliland ay ku leeyihiin duleedka deegaankaasi Tukaraq.
Dagaalka oo muddo socday ayaa waxaa la isku adeegsaday hubka noocyadiisa kala duwan, waxaana dhawaqa madaafiicda iyo rasaasta noocyadeeda kala duwan laga maqlayey gudaha deegaankaasi.
Inkastoo khasaaraha dhabta ah aanan la ogeyn ayaa waxaa soo baxaya warar hor dhac oo sheegaya in khasaare xoogan uu soo gaadhay ciidamada Somaliland, waxaana saraakiil u hadashay Jabhadda xoreynta gobolka Sool ay sheegeen in muddo kooban ay gacanta ku hayeen saldhigii ay weerareen oo ku yaala duleedka deegaanka Tukaraq isla markaasna ay dib uga baxeen goobtaasi.
Ciidamada Somaliland oo ku gaashaaman gaadiidka dagaalka iyo hubka noocyadiisa kala duwan ayaa saaka ku gadaamay saldhigii la wareeray, waxaana ay gaadiidka dagaal dusha ka saareen Buurta Laba Madaxley oo dhacda duleedka Tukaraq.
Dhawaqa rasaasta iyo madaafiic hor leh ayaa hada la maqlayaa deegaanka Tukaraq, waxaana uu dagaal ka dhex qarxay ciidamada Somaliland iyo Puntland, kadib dagaalkii xalay oo ay saaka iyaguna weerar kusoo qaadeen ciidamada Puntland.
Warar ku aadaan khasaaraha ka dhashay dagaalkan dambe ayaa hada soo baxaya, waxaana weli socota rasaas iyo madaafiic xoogan oo ay is dhaafsanayaan ciidamada Somaliland iyo Puntland.